9 Menne me ho anaa?+ Menyɛ ɔsomafo?+ Minhuu yɛn Awurade Yesu?+ Ɛnyɛ mo ne m’adwuma wɔ Awurade mu? 2 Sɛ menyɛ ɔsomafo mma ebinom a, mo de, meyɛ ma mo, na mo ne nsɔano+ a ɛma me somafodwuma di mũ Awurade mu. 3 Nea mede bua wɔn a wobu me atɛn ni:+ 4 Yenni tumi sɛ yedidi+ na yɛnom anaa? 5 Yenni tumi sɛ yɛfa onuawa bi yɛ yɛn yere+ ne no nantew te sɛ asomafo a aka no ne Awurade nuanom+ ne Kefa+ anaa? 6 Anaasɛ me ne Barnaba+ nkutoo na yenni tumi sɛ yegyae adwumayɛ?+ 7 Hena na ɔyɛ ɔsraani a n’ankasa tua ne ho ka? Hena na ɔyɛ bobeturo na onni mu aba?+ Anaasɛ hena na ɔhwɛ mmoa, na ɔnnom wɔn nufusu no bi?+ 8 So mede nnipa adwene na ɛreka nsɛm+ yi? Anaa Mmara+ no nso nka saa? 9 Na wɔakyerɛw wɔ Mose mmara no mu sɛ: “Nkyekyere nantwi ano bere a ɔreporow awi.”+ So nantwi ho na Onyankopɔn dwen? 10 Anaasɛ yɛn mmom nti na ɔkaa saa? Nokwarem no, yɛn nti na wɔkyerɛwee,+ efisɛ nea ofuntum no, ɛsɛ sɛ ofuntum no anidaso mu, na nea ɔporow awi no, ɛsɛ sɛ ɔyɛ saa a ɔwɔ anidaso sɛ obenya bi.+ 11 Sɛ yɛadua honhom fam nneɛma+ ama mo a, so ɛyɛ ade kɛse bi sɛ yebetwa honam fam nneɛma afi mo hɔ?+ 12 Sɛ afoforo nya tumi a ɛte saa wɔ mo so+ a, yɛn tumi mmoro saa anaa? Nanso yennii saa tumi no,+ na mmom yekura nneɛma nyinaa mu na yɛamfa biribiara ansi Kristo asɛmpa no kwan.+ 13 Munnim sɛ wɔn a wɔyɛ adwuma kronkron no di+ asɔrefie nneɛma no bi, na wɔn a wɔsom+ wɔ afɔremuka ho daa no ne afɔremuka no wɔ kyɛfa? 14 Saa ara nso na Awurade ahyɛ+ sɛ wɔn a wɔka asɛmpa no mfa asɛmpa no so ntena ase.+ 15 Nanso memfaa nhyehyɛe yi mu biara nnii dwuma.+ Nokwarem no, mankyerɛw eyinom sɛnea mede bedi dwuma, na eye ma me sɛ mewu mmom—obiara ntumi mma nea mede bɛhoahoa me ho+ nyɛ kwa! 16 Na sɛ meka asɛmpa+ no a, ɛnyɛ ade a ɛsɛ sɛ mede hoahoa me ho, efisɛ ɛyɛ ahyɛde+ a ɛda me so. Na sɛ manka asɛmpa no a, anka minnue!+ 17 Sɛ miyi me yam yɛ+ a, mewɔ akatua;+ sɛ nso meyɛ no amemenemfe mu a, wɔde ofiehwɛ adwuma+ no ahyɛ me nsa ara. 18 Afei dɛn ne m’akatua? Ɛne sɛ bere a mereka asɛmpa no mede asɛmpa no bɛma kwa,+ sɛnea ɛbɛyɛ na memfa tumi a mewɔ wɔ asɛmpa no ho no nni dwuma kwammɔne so. 19 Na made me ho afi nnipa nyinaa ho de, nanso mayɛ me ho akoa+ ama obiara, sɛnea ɛbɛyɛ a menya+ nnipa pii. 20 Enti meyɛɛ me ho sɛ Yudani maa Yudafo,+ na manya Yudafo; wɔn a wɔwɔ mmara ase no, meyɛɛ me ho sɛ nea ɔwɔ mmara ase maa wɔn,+ ɛwom sɛ m’ankasa minni mmara ase+ de, na manya wɔn a wɔwɔ mmara ase no. 21 Wɔn a wonni mmara no,+ meyɛɛ me ho sɛ nea onni mmara maa wɔn,+ ɛwom, ɛnyɛ sɛ minni mmara ase wɔ Onyankopɔn mu na mmom mewɔ mmara ase+ wɔ Kristo mu,+ na manya wɔn a wonni mmara no. 22 Wɔn a wɔyɛ mmerɛw no, meyɛɛ mmerɛw maa wɔn, na manya wɔn a wɔyɛ mmerɛw.+ Mayɛ biribiara ama nnipa ahorow nyinaa,+ sɛnea ɛyɛ dɛn ara a, megye ebinom nkwa. 23 Na asɛmpa no nti na meyɛ ade nyinaa, na ama me ne afoforo anya mu kyɛfa.+ 24 Munnim sɛ ammirikatufo+ a wosi akan nyinaa tu mmirika no de, nanso obiako pɛ na onya nkonimbo+ no? Muntu mmirika+ no saa na mo nsa aka.+ 25 Bio nso, obiara a ɔde ne ho hyɛ akansi mu no hyɛ ne ho so+ nneɛma nyinaa mu. Nanso wɔn fam no, wɔyɛ na wɔanya abotiri a ɛsɛe,+ na yɛn de, nea ɛrensɛe.+ 26 Ne saa nti mmirika a mitu+ no, mintu no biarabiara; akuturuku a meretoto no, mehwɛ na mantoto no sɛnea mereboro mframa;+ 27 na mmom midi me nipadua nya,+ na mehyɛ no sɛ akoa, na bere a maka asɛm no akyerɛ afoforo no, m’ankasa manyɛ obi a ɔmfata+ ɔkwan bi so.